Interserver – 5,00 $ / mois
– 0,99 $ / mois
– wuxuu bilaabmaa 0,80 $ / mois
– wuxuu bilaabmaa 3,99 $ / mois
– wuxuu bilaabmaa 2,95 $ / mois
– wuxuu bilaabmaa 2,96 $ / mois
2.1 1 – Hébergement La bixiyo (Email + Site Web)
Inkasta oo aysan ahayn mawduuc ka mid ah caarada celceliska carrabka carrada, aasaaska email-ka ganacsiga ma aha mid aad u adag. Envoyez un courriel à martigelintu waa xaqiiqda ereyga guud oo si fudud u muujineysa adeegga ku yaala emailladaada. Gmail, tusaale ahaan, waxaa sidoo kale loo tixgelin karaa email ahaan martigelin.
Si kastaba ha noqotee, baaxadda maqaalkani waxaan u qaadaneynaa dans aad eegayso inaad marto emailadaada. Tani waxay ka dhigan tahay dans aad si buuxda u xakamayso emailadaada, adoo abuuraya cinwaanno iyo dejinta sida loo maamulayo meesha ay ku kaydsan yihiin.
Cinwaanka emailka caadada ayaa u eegi doona wax sidan oo kale ah:
[Envoyer un e-mail à ilaaliyo]
Marka aan isticmaalo ereyga iimayl ganacsi oo ku saabsan waxa aan runtii tixraacayo isticmaalka domaine gaaga ah ee emailskaaga. Waxaa jira sababo fara badan oo ka mid ah tan ay ka mid yihiin xirfadlaha si amniga xogta. U samee aragtida ganacsiga, kharashka ma aha mid la mamnuucayo, faa’iidaduna aad uga badan tahay kharashka.
Domaine Isticmaalka caadada ayaa u oggolaan doona macaamiishaada inay si sax ah u ogaadaan cidda ay la tacaalayaan. Sababtoo ah in domainka uu leeyahay oo uu maamulo adiga, waxaa ku adkaan doonta qof inuu ku been abuurto sida shirkaddaada.
Shirkadda A – [Courriel ilaaliyo]
Shirkadda B – [Courriel ilaaliyo]
Par e-mails de martigelinta ganacsi, aad si buuxda u xakamaynaya sida e-mails dans loo soo diray aad u dhaqmaa. Tusaale ahaan, haddii aad ku jirto ganacsi halkaas oo ay jiraan xeerar gaar ah sida degaanka xogta, waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad ku kaydiso emaylkaaga xafiisyada meelaha gaarka ah.
Maalgashadayaasha maanta waxay u muuqdaan inay si aad ah ula xiriiraan email ahaan. Waxay u badan tahay à qaar ka mid ah emailadaas ay ku jiri doonaan macluumaad muhiim ah sida biilka, qaansheegadka, qandaraasyada iyo wixii la mid ah. Adiga oo isticmaalaya email-kaaga martigelinaya, waxaad noqon doontaa qalab aad u fiican si aad wax wax uga qabato xaaladaha ka soo baxa arrimaha emailka.
Qaar badan oo ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee martigeliyaha webka fiican leh waa inuu sidoo kale ku jiraa martigeliye email wanaagsan. Tilmaamahaas waxaa ka mid ah liiskaaga ugu sarreeya waa inuu noqdaa kalsooni iyo dabacsanaan. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah:
Ganacsi ahaan, macaamiishaadu waxay u baahan yihiin inay ku kalsoonaadaan hufnaanta ganacsigaaga. Waxay kugula talinayaan macluumaadka qarsoodiga ah, sida magacyada, cinwaanada emailka iyo macquul ahaan xitaa macluumaadka maaliyadeed. Xaqiijinta emailkaaga waa mid muhiim ah oo waa inaad fiirisaa qaababka isku dhafan sida nabadgelyada macluumaadka, bini-aadamka, anti-spam iyo kuwa la midka ah ee emailka martida ah.
Waxaan had iyo jeer hubinnaa e-maylkeena annaga oo adeegsanayno habab kala duwan oo ay u fududaan karto in la iloobo in mid kasta oo ka mid ahi u baahan karo habaynno kala duwan Markaad raadineyso bixiye martigelikai iMPi.
Webmail wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho macmiil email oo ku salaysan macaamiisha oo aad u habboon. IMAP waxay kuu ogolaaneysaa inaad akhrido emailkaaga qalab kasta oo aanad ka soo dejisan. POP dhinaca kale waxay u baahan tahay dans aad soo dejiso emailadaada ka hor intaadan akhrinin.
Haysashada cinwaanka IP liiska madow waa hab hubaal ah oo loo arko waxqabadyada ganacsigaaga (gaar ahaan macmiilka la xiriira!) À lagu tirtiro si deg deg ah. Tani waxay noqon kartaa arrin muhiim ah sida mid ka mid ah IP-gaaga uu ku liis-gareeyo liiska wuxuu qaadanayaa wakhti iyo dadaal si uu mar labaad u nadiifiyo. Iska ilaali emailada martigeliya ee leh sumcad ah in macaamiishu ay ku helaan liistada madow maaddaama aad ku dhammaan karto IP-ga dib loo soo celiyo iyo horayba loogu soo rogay liis madow.
1 – Hébergement La bixiyo (Email + Site Web)
Email-ka loo soo bandhigay waa marka aad hesho email martigaline oo la socota (markaa ereyga ‘xirma’) ee xisaabtaada webkaada. Iyada oo ku xiran baahiyahaaga, tan waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh maadaama aadan u baahnayn inaad maareysid emailadaada koontada gaarka ah ama aad bixiso kharash dheeraad ah ee martigelinta martigelinta.
Si kastaba ha noqotee, boorsada emailka ah ee la xirxiray waxaa badanaa ku xaddidan booska guud ahaan awoodda aad ku leedahay xisaabtaada internetka. Xirmooyinka badankooda waxay u qoondeeyaan hal xabbo meel oo la wadaago inta u dhaxeysa emailkaaga iyo martigelinta internetka. Marka laga reebo booska, waxaad sidoo kale wadaagi doontaa xaddiga bande passante loo qoondeeyey xisaabtaada.
Faa’iidooyinka – Facile à installer, horumarinta sifooyinka, martigelin xisaab email yar oo yar oo qiimo ah.
Adeegga martigelinta emailka ee ugu fiican? Ma aha dhammaan shirkadaha martigalinta ee websaydhka ah inay bixiyaan qorshooyin khaas ah hébergement de messagerie, laakiin tusaale ahaan, tusaalooyin cad oo wanaagsan ee adeegga martigelinta emailka ah ayaa laga heli karaa Soo dhaweynada.
Waxaa jira bixiyeyaasha adeegga sida Google iyo Microsoft kuwaas oo haysta emailka xalinta sida G Suite iyo Microsoft 365 Business. Kuwani waa adeegyo email oo gaar ah kuwaas oo sahlan à la isticmaalo oo awood leh laakiin waxay u baahan yihiin à si gooni ah loo maareeyo martigalinta xitaa haddii ay isticmaali karaan magacaaga domaine caadada.
Hoos u dhacani waa dans adeegyada laga yaabo inay soo afjaraan qiime jaban marka tirada shaqaalahaaga ay korodho. Tusaale ahaan, G Suite wuxuu ku kici karaa kaliya 5,40 $ qorshe aasaasi ah, laakiin taasi waa qiimaha lagu bixinayo halkii qofba bishii.
Adeegyada: Laguugu soo dhiibay Courriel iyo La-Qaadasho Courriel ah.
Xitaa ka mid ah martigaliyayaasha websaydhka ku jiheeysan miisaaniyadda, NameCheap wuxuu u arkaa mid rakhiis ah (oo aan pun loogu talagalin). Qorshayaasha martigelinta ee la wadaago ee ka soo dhacaya illaa ugu hooseeya 1,44 $, xitaa marka la cusbooneysiinayo waxay ku faantaan qaar ka mid ah qiimaha ugu hooseeya ee warshadaha. Martigelinta ka sokow, NameCheap waxay sidoo kale soo bandhigtaa alaabo kale sida magacyada domain iyo adeegyada amniga.
Marka laga soo tago qorshayaashooda bilowga ah ee martigelinta qiimaha jaban ee webka, Namecheap waxay leedahay adeegyo badan oo ay ka mid yihiin marti-gelinta emaylka ee gaarka loo leeyahay. Laga soo bilaabo waxyar oo ah 0,99 $ / mois waxaad ka heli kartaa ma aha oo kaliya martigelinta emaylka laakiin sidoo kale xoogaa boos ah oo kaydinta faylka. Qiimuhu kor ayuu u kacayaa iyadoo kuxiran inta sanduuq boosta ee aad u baahan tahay.
Xoghayuhu wuxuu ku salaysan yahay Kaunas, Lituanie waxayna bixisaa noocyo kala duwan oo qorsheynaya martigelinta. Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan martigelinta est martigelinayaan waa dans ay la timaado email la xirxiray sidoo kale. Ayadoon la xariirin haddii aad isku qorto qorshaha martigelinta ee ay wadaagaan ama xitaa VPS martigelinta, waxay heleen emailkaaga martigelinta.
Iyada oo ku saleysan Lost Angeles California labadaba, InMotion Hosting waxay ku dhowdahay sannado ka badan 15. Shirkadda ayaa muddo dheer ka ahayd mid ka mid ah martigeliyadayada loogu talagalay sababo badan iyo xitaa websaydhka ay wadaagaan wax yaima bah.
Iyada oo haysata rikoor adeeg toban sano ah oo ka hooseeya suumanka, TMDhosting ayaa sanado badan xiriir wadaag la ah milkiilayaasha websaydhka ah. Waxay leedahay goobo badan oo xogta xarunta ah oo kutaala Mareykanka oo lagu daro midda Nederland. Iyada oo qiimayaashu ay ka bilaabanayaan waxyar sida 2,95 $ bishii, doorashadani runtii waa dhabar jab weyn haddii aad u tixgaliso inay ku xidhmaan emaylka qorshahooda martigelinta.
Waxaan tixgelineynaa A2 Hosting sida mid ka mid ah websiyada ugu sareeya ee agagaaraha ah iyo waxa uu leeyahay faafin wanaagsan oo ah meelo xarumaha xogta aduunka – Amsterdam, Singapour, Arizona iyo, dabcan, Michigan. Waxay bixisaa qalab aad u awood badan oo isku dheelitiran à la waayo-aragnimo macmiil oo weyn oo leh qiimo macquul ah.
Enquête: Imisa ayaad ku bixinaysaa khadka internetka
Baca lebih lanjut, email tentang email badanaa la xidhiidha bixiyeyaasha waaweyn sida Google ama
तुसाले अहान, इमेलका अया बदनाआ ला xidhiidha bixiyeyaasha waaweyn sida Google ama Yahoo maadaama
אל תשאלי, שלח אימייל ayaa badanaa la xidhiidha bixiyeyaasha waaweyn לדף גוגל אם יאהו
Tusaale aaan، emailka ayaa badanaa la xidhiidha bixiyeyaasha waaweyn sida Google ama Yahoo maadaama